Mufaro Chibereko Chemweya
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Altai Alur Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
VANHU vanoda kufara muupenyu. Asi mumazuva ano ekupedzisira, munhu wese anosangana nematambudziko ‘akaoma kubata nawo.’ (2 Tim. 3:1) Kusabatwa zvakanaka, utano husina kunaka, kushaya mabasa, kufirwa, kana zvimwe zvinhu zvinokonzera kuzvidya mwoyo, zvinogona kushayisa vamwe mufaro zvishoma nezvishoma. Kunyange vashumiri vaMwari vanogona kuora mwoyo, vopedzisira vasisina mufaro. Kana izvozvo zviri kuitika kwauri, ungawanazve sei mufaro?
Kuti tipindure mubvunzo iwoyo, tinofanira kutanga tanzwisisa chinonzi mufaro wechokwadi uye kuti vamwe vakaramba sei vachifara pasinei nematambudziko. Zvadaro, tichadzidza kuti tingaita sei kuti tirambe tiine mufaro, kunyange kutouwedzera.
Mufaro wechokwadi wakasiyana nemanzwiro anoita munhu kana aine zviri kumunakidza. Semuenzaniso, kana munhu adhakwa anogona kutanga kungoseka-seka. Asi doro parinopera kuseka kwese kunobva kwati hwa, uye anogona kubva atanga kufunga nhamo dzake. Kunakidzwa ikoko ndekwenguva pfupi uye hausi mufaro wechokwadi.​—Zvir. 14:13.
Asi mufaro manzwiro akasimba anobva pasi pasi pemwoyo. Mufaro unotsanangurwa ‘semanzwiro anoita munhu paanowana chinhu chakanaka kana kuti paanenge achitarisira kuchiwana.’ Kuva nemufaro kunoreva kuti munhu anoramba achifara pasinei nekuti zvinhu zvakanaka here kana kuti hazvina. (1 VaT. 1:6) Munhu anogona kuvhiringidzwa nechimwe chinhu asi oramba achifara mumwoyo make. Semuenzaniso, vaapostora vakarohwa nemhaka yekutaura nezvaKristu. Asi “vakabva zvavo pamberi peSanihedrini, vachifara nokuti vakanga vanzi vakakodzera kuzvidzirwa zita rake.” (Mab. 5:41) Zviri pachena kuti vakanga vasiri kufarira kurohwa kwavakanga vaitwa. Asi sevashumiri vaMwari, mufaro wavo waibva pakuramba vakaperera kwaari.
Hatiberekwi tiine mufaro iwoyo, uyewo hatingoerekani tava nawo. Nemhaka yei? Nekuti mufaro wechokwadi chimwe chezvinhu zvinoumba chibereko chemweya mutsvene waMwari. Tichibatsirwa nemweya waMwari, tinogona kuva ‘neunhu hutsva,’ uhwo hunosanganisira mufaro. (VaEf. 4:24; VaG. 5:22) Uye patinova nemufaro, zvinova nyore kuti titarisane nematambudziko eupenyu.
VANHU VATINOFANIRA KUTEVEDZERA
Jehovha aida kuti panyika pave nezvinhu zvakanaka, kwete zvinhu zvakaipa zvatiri kuona mazuva ano. Asi zvakaipa zvinoitwa nevamwe hazvitadzisi Jehovha kuva nemufaro. Shoko raMwari rinoti: “Simba nomufaro zviri panzvimbo yake.” (1 Mak. 16:27) Uyezve, zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nevashumiri vaJehovha ‘zvinofadza mwoyo wake.’​—Zvir. 27:11.
Tinogona kutevedzera Jehovha kuburikidza nekusanyanya kunetseka kana zvataitarisira zvikaenda nepamwe. Pane kuti tishaye mufaro, tinogona kuisa pfungwa dzedu pazvinhu zvakanaka zvatiinazvo, tomirira nemwoyo murefu zvinhu zviri nani zviri mberi. *
Tinogona kuwana mienzaniso yakawanda muBhaibheri yevanhu vakaramba vaine mufaro pavaiva mumatambudziko. Abrahamu akatsungirira mamiriro ezvinhu aiva nengozi kuupenyu hwake uye matambudziko aikonzerwa nevamwe. (Gen. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Pasinei naizvozvo, Abrahamu akaramba aine mufaro mumwoyo make. Akazviita sei? Aifunga nezvetariro yake yekurarama munyika itsva pasi peumambo hwaMesiya. (Gen. 22:15-18; VaH. 11:10) Jesu akati: “Abrahamu baba venyu vakafara kwazvo vachitarisira kuona zuva rangu.” (Joh. 8:56) Tinogona kutevedzera Abrahamu kuburikidza nekufungisisa mufaro uri mberi.​—VaR. 8:21.
Sezvakaitwa naAbrahamu, muapostora Pauro naSirasi vainge vakaisa pfungwa pavimbiso dzaMwari. Vaiva nekutenda kwakasimba, uye vakaramba vachifara pasinei nematambudziko avaisangana nawo. Semuenzaniso, pashure pekunge varohwa zvakaipisisa uye vakandwa mujeri, “pakati pousiku Pauro naSirasi vakanga vachinyengetera vachirumbidza Mwari norwiyo.” (Mab. 16:23-25) Kuwedzera pakuwana simba kubva patariro yavo, Pauro naSirasi vaifara nekuti vaitambudzirwa kuva vateveri vaKristu. Tinogona kutevedzera Pauro naSirasi kuburikidza nekuramba tichifunga zvakanaka zvinobva pakushumira Mwari takatendeka.​—VaF. 1:12-14.
Mazuva anowo, tine mienzaniso yakawanda yehama nehanzvadzi dzinoramba dziine mufaro padzinosangana nematambudziko. Semuenzaniso, muna November 2013, Super Typhoon Haiyan payakarova muPhilippines, mhuri dzeZvapupu dzinopfuura 1 000 dzakaparadzirwa misha yadzo. George, uyo ane imba yakaparadzwa muguta reTacloban, akati: “Pasinei nezvakaitika, hama dziri kufara. Handikwanisi kutsanangura mufaro watiinawo.” Pese patinosangana nematambudziko akakura chaizvo, ticharamba tiine mufaro kana tikafungisisa zvatakaitirwa naJehovha. Zvii zvimwe zvatinopiwa naJehovha zvinoita kuti tifare?
ZVIKONZERO ZVINOITA KUTI TIFARE
Ushamwari hwedu naMwari ndicho chikonzero chikuru chinoita kuti tifare? Tinoziva Changamire wezvinhu zvese. Iye ndiye Baba vedu, Mwari wedu, uye Shamwari yedu!​—Pis. 71:17, 18.
Tinokoshesawo chipo cheupenyu uye kunakidzwa kwatinoitwa nahwo. (Mup. 3:12, 13) Sevanhu vakaunzwa kuna Jehovha, tinonzwisisa zvaanoda kuti tiite uye mararamiro aanoda. (VaK. 1:9, 10) Saka tinorarama upenyu hune chinangwa. Asi vanhu vakawanda havanzwisisi chinangwa cheupenyu. Achiratidza musiyano uyu, Pauro akanyora kuti: “‘Ziso harina kuona nenzeve haina kunzwa, uyewo mumwoyo momunhu hamuna kufungwa zvinhu izvo Mwari akagadzirira vaya vanomuda.’ Nokuti Mwari akazvizarurira isu achishandisa [mweya] wake.” (1 VaK. 2:9, 10) Kunzwisisa kwatinoita zvinodiwa naJehovha uye chinangwa chake kunoita kuti tifare.
Jehovha ane zvakawanda zvaakatiitira. Hatifari here kuziva kuti zvivi zvedu zvinogona kuregererwa? (1 Joh. 2:12) Nemhaka yengoni dzaMwari tine tariro yechokwadi yekuti nyika itsva iri kuuya nekukurumidza. (VaR. 12:12) Kunyange iye zvino, Jehovha anotipa shamwari dzakawanda dzatinonamata nadzo. (Pis. 133:1) Shoko raMwari rinotivimbisa kuti Jehovha anodzivirira vanhu vake kubva kuna Satani nemadhimoni ake. (Pis. 91:11) Kana tikafungisisa makomborero ese aya anobva kuna Mwari, tichawedzera kuva nemufaro.​—VaF. 4:4.
UNGAWEDZERA SEI MUFARO WAKO?
MuKristu ari kufara, angawedzera here mufaro wake? Jesu akati: “Ndataura zvinhu izvi kwamuri, kuti mufaro wangu uve mamuri uye mufaro wenyu uzadziswe.” (Joh. 15:11) Izvi hazviratidzi here kuti tinogona kuwedzera kufara? Unogona kuenzanisa zvaunoita kuti uwedzere kufara nekukuchidzira moto. Unofanira kuramba uchiisa huni kuti moto uwedzere kupisa. Saizvozvowo, unofanira kusimbisa ushamwari hwako naJehovha kuti uwedzere kufara. Yeuka kuti mweya mutsvene ndiwo unotibatsira kuti tive nemufaro. Saka uchawedzera kufara kana ukaramba uchikumbira kubatsirwa nemweya waJehovha uye ukafungisisa zviri muShoko rake rakafemerwa.​—Pis. 1:1, 2; Ruka 11:13.
Unowedzerawo kufara kana ukaita zvinhu zvinofadza Jehovha. (Pis. 35:27; 112:1) Nemhaka yei? Nekuti takasikwa kuti ‘titye Mwari wechokwadi uye tichengete mirayiro yake. Nekuti izvi ndizvo zvese zvinosungirwa kuti munhu aite.’ (Mup. 12:13) Nemamwe mashoko, takasikirwa kuita kuda kwaMwari. Saka patinoshumira Jehovha, tinova nemufaro wakakura chaizvo. *
KUVA NEMUFARO KUNOTIBATSIRA SEI?
Patinowedzera kuva nemufaro, zvinowedzera kutibatsira nedzimwe nzira. Semuenzaniso, tinowedzera kufadza Baba vedu vekudenga sezvatinovashumira tichifara pasinei nematambudziko atingasangana nawo. (Dheut. 16:15; 1 VaT. 5:16-18) Uyewo, kuva nemufaro wechokwadi kuchaita kuti tidzivise mararamiro ekuda pfuma, toedza chaizvo kuzvipira pakutsigira Umambo hwaMwari. (Mat. 13:44) Patinoona zvakanaka zvinovapo nemhaka yekuzvipira kwedu, tinowedzera kufara, tinowedzera kunzwa zvakanaka, uye tichaita zvinoita kuti vamwe vafare.​—Mab. 20:35; VaF. 1:3-5.
“Kana uchifara uye uchigutsikana neupenyu hwako iye zvino, unogona kuva neutano huri nani mune ramangwana.” Ndizvo zvakanyorwa nemumwe muongorori wepaUniversity of Nebraska muUnited States pashure pekunge atarisa dzimwe ongororo dzezveutano dzakaitwa. Izvozvo zvinoenderana nezviri muBhaibheri, iro rinoti: “Mwoyo unofara unorapa.” (Zvir. 17:22) Ichokwadi kuti sezvaunowedzera kufara, unogona kuva neutano huri nani.
Saka pasinei nekuti tiri kurarama munguva dzakaoma, tinogona kuva nemufaro wechokwadi uye unoramba uripo sezvatinova nemweya mutsvene watinowana nekunyengetera, kudzidza uye kufungisisa zviri Shoko raJehovha. Tinowedzerawo kufara patinofungisisa makomborero atiri kutowana iye zvino, patinotevedzera kutenda kwevamwe uye patinoedza kuita kuda kwaMwari. Patinoita zvese izvozvo, zvinotaurwa pana Pisarema 64:10 zvichaitikawo kwatiri. Inoti: “Munhu akarurama achafara muna Jehovha uye achapotera kwaari.”
^ ndima 10 Tichakurukura nezvemwoyo murefu mune imwe yenyaya dzechikamu chino chenyaya dzinotevedzana dzinokurukura ‘chibereko chemweya.’
^ ndima 20 Kuti uone dzimwe nzira dzekuti uwedzere mufaro wako, ona bhokisi rakanzi “ Dzimwe Nzira Dzekuwedzera Nadzo Mufaro.”
Dzimwe Nzira Dzekuwedzera Nadzo Mufaro
Ramba uchiita kuti upenyu hwako husava netwakawandawanda.​—Ruka 12:15.
Iva nemwero pane zvaunotarisira.​—Mika 6:8.
Iva nechokwadi chekuti purogiramu yako (yebasa, chikoro, kuzvivaraidza, nezvimwewo) inokubvumira kuzadzisa zvinangwa zvekunamata.​—VaEf. 5:15, 16.
Iva munhu anonzwisisa.​—VaF. 4:5.